Toerana filokana an-tserasera is Islandy - Kaody Bonus Bonus an-tserasera
Loading ... Ny lalàna mifehy ny filokana amin'ny Internet any Islandy dia mandrara ny asan'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny filokana. Voarara ny filokana eto amin'ny firenena, na amin'ny filokana an-tanety na amin'ny Internet. Ny fivoahana ihany koa dia fikambanana notontosain'ny University of Lottery. Ny resaka fahazoan-dalàna ity karazana filokana ity dia efa nodinihin'ny governemanta imbetsaka. Na izany aza, tsy misy fiovana tsara miandry ny mpilalao daty. Na dia tokony homarihina aza fa ny fidirana amin'ireo tranonkala eo an-toerana filokana an-tserasera dia hanampy amin'ny fanesorana haingana sy mahomby amin'ireo olana ara-bola ao amin'ny firenena. Mandritra izany fotoana izany, ny mpilalao sy ny filokana amin'ny Internet amin'ireo mpankafy fanatanjahantena any Islandy dia mahita banga sy mampiasa ny serivisy ataon'ny orinasa vahiny.
Lisitry ny Topik 10 Icelandic Online Casino Sites
Gambling in Islandy
Hatramin'ny volana janoary tamin'ny 2017 dia tsy ara-dalàna ny filokana any Islandy, ankoatry ny loteria sy ny hetsika filokana hafa natombok'ireo fikambanana tsy mitady tombom-barotra. Ny hany fitantanana eken'ny hetsika filokana dia ny University of Islandy Lottery. Ity fikambanana ity dia manana milina fantsom-pifandraisana maromaro, izay nozahana ara-dalàna tamin'ny taona 1994, akaikin'ny bara sy tobin-tsolika.
Misy takelaka amin'ny aterineto amin'ny aterineto manaiky mpilalao avy any Islandy
Jereo ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any Islandy, ary manolotra kilalao avo lenta sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe avy amin'ny milina slot ka hatramin'ny lalao kasino mivantana amin'ny mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa. Azonao atao koa ny mamaky ny hevitray momba ny tranokala an-tserasera, mba hahalalanao ny fampiroboroboana an-tserasera, bonus ary safidy fandoavam-bola tsara indrindra azon'ny mpilalao avy any Islandy.
Araka ny fanadihadiana natao tato ho ato tranokala KeyToCasino, ny lalao amin'ny trano filokana an-tserasera dia tsy misy mihoatra ny 50% amin'ny vahoaka manontolo amin'ny lalànan'ny planeta an'ny fireneny. Hita fa miovaova arakaraka ny fanjakana sy ny isan'ny filokana amin'ny Internet. Raha any amin'ny firenena sasany dia mandrara ny karazan-tserasera an-tserasera amin'ny fandrarana hafa dia mihatra amin'ny indostrian'ny filokana eo an-toerana ihany ary tsy mihatra amin'ny orinasa vahiny.
Ny fikarohana dia natao tamin'ny fanangonana sy fandalinana ny lalànan'ny trano filokana an-tserasera sy an-tserasera any amin'ny firenena 225 manerantany ary ny fandinihana loharanom-baovao amin'ny fiteny 46 samihafa. Ny loharanom-baovao dia voafidy ho fahatokisana, toy ny tranokalan'ny masoivohon'ny governemanta eo an-toerana sy ny haino aman-jery voatonona matetika ao amin'io faritra io. Ka ny 95% -n'ny firenena sy ny 98% -n'ny mponina no natao tamin'ny fanadihadiana.
Mikasika ny fikarohana an-tanety an-tanety dia nanambara fa voafetra na voarara mihitsy aza izy ireo any amin'ny firenena 74, raha any amin'ny fanjakana 151 filokana kosa dia ara-dalàna tanteraka. Saingy amin'ny filokana an-tserasera dia tsy mitovy ny toe-javatra:
Voarara ao amin'ny firenena 39 ny lalao an-tserasera.
Ny fanjakana 32 dia manery ny fandraràna ny asan'ireo mpandraharaha ao an-toerana amin'ny casinos amin'ny aterineto, saingy tsy ny fampiasana solika any amin'ny faritra hafa.
Firenena 61 no mamela ny filokana amin'ny Internet, fa ny antsasaky ny lalàna dia ny orinasa eo an-toerana ihany no mihatra. Toy ny amin'ny andininy etsy ambony, ny lalàna mifehy an'ireo firenena ireo dia tsy mifehy ny fahazoan-dàlana amin'ny faritra hafa.
Ny fanjakana 93 dia tsy mandrara, fa tsy lisansa amin'ny aterineto.
Amin'ny ankapobeny, misy ny fameperana amin'ny filokana amin'ny aterineto na firenena hafa ao amin'ny firenena 132, izay mitaky ny 56% an'ny mponina maneran-tany.
Ka inona no miandry ny olon-tsotra, izay nanapa-kevitra ny hanandrana ny vintan'izy ireo amin'ny tranonkala? Ireo mpilalao any amin'ny firenena 25 dia tokony hitandrina tsara ary hahafantatra ny zavatra ataony, satria miatrika andraikitra ara-dalàna amin'ny lalao an-tserasera izy ireo. Any amin'ny firenena 15, mety hanome ny sazy ara-pitantanana izy io, ary afaka milalao malalaka ny mponin'ny firenena 92 ​​- ho azy ireo tsy atahorana izany.
Manohiza manadihady mpikaroka dia nandinika ny fifanarahana momba ny fanomezana serivisy 655 casino an-tserasera ho an'ny fanjakana misy ny fanjakana dia voarara ny manome serivisy. Ny firenena Troika no mitarika ny fandrarana ny lalao ho an'ny olom-pireneny dia izao manaraka izao: Etazonia (72% fandrarana casino online), France (70%), Israel (54%). Ireo firenena telo voalohany manana farafahakeliny ferana voafetra dia tany Islandy (7%), Nouvelle Zélande ary Aostralia.
Mba hahatakarana, inona ny fihetsiky ny manampahefana amin'ny filokana an-tserasera voafaritra voafaritra firenena ary voarara ny filokana an-tserasera maro hilalao ny mponin'ity firenena ity, ny fanadihadiana dia nanao naoty 225 firenena sy faritany mifototra amin'ny tombatombana amin'ny fahafahan'ny filokana ( Score momba ny fahafaha-miloka). Ny isa farafahakeliny amin'ny ambaratonga an'ity tombana ity dia 1,000 amin'ny 500 izay mifamatotra amin'ny isan-jato ho an'ny mponina an-tserasera amin'ny Internet ary 500 hafa no mampiavaka ny fanjakana amin'ny Internet sy ny trano filokana an-tserasera. Ity farany dia misy lafin-javatra toy ny mpilalao heloka bevava / ara-pitondrana misy amin'ny filokana an-tserasera sy ny famindrana vola eo amin'ny casino sy ny mpilalao.
Ny lohalaharana amin'ny laharana dia i Chili, Andorra ary Venezoela, izay nahazo isa 960. Eo amin'ny farany ambany ny isa nanorim-ponenana an'i Frantsa (isa 412), Iran (407) ary Etazonia (311). Nahazo isa 686 i Russia, mitana ny laharana 173 amin'ny lisitr'ireo firenena 225.
0.1 Lisitry ny Topik 10 Icelandic Online Casino Sites
2.1 Gambling in Islandy
2.2 Misy takelaka amin'ny aterineto amin'ny aterineto manaiky mpilalao avy any Islandy
planeta 7 casino bonus tsy misy petra-bola